by कालिका टाईम्स १२ श्रावण २०७८ १८:५१ 27 July 2021 0
बलिउड नायिका शिल्पा सेट्टीका पति राज कुन्द्रा पोर्नोग्राफीको मामलमा प्रहरी हिरासतमा छन् । भारतमा पोर्न चलचित्र छायांकन गरेर एपबाट प्रशारण गरेको आरोपमा राज पक्राउ परेका हुन् । उनीमाथि अहिले प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ ।
राज पक्राउ परेपछि यसको सिधा असर शिल्पाको करिअरमा पनि परेको छ । उनी, ‘सुपर डान्सर ४’ को निर्णायक थिइन् । यो लोकप्रिय रियालिटी शोमा शिल्पा राज पक्राउ परेपछि उपस्थित भएकी छैनन् ।
शिल्पा अझै केही साता यो शोमा सहभागी नहुने भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । शिल्पा शोमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि अब शोका निर्माताले नयाँ निर्णायक तय गरेका छन् ।
मिडियाका अनुसार, शोको निर्णायकमा नायक रितेश देशमुख र नायिका जेनेलिया डिसुजालाई अनुवन्धित गरिएको छ । उनीहरु, अतिथी निर्णायकको रुपमा कार्यक्रममा सहभागी हुने छन् । यो शोमा गीता कपूर र अनुराग बासु मुख्य निर्णायकको रुपमा छन् ।
जेनेलिया र रितेशले एकसाथ शोमा निर्णायकको रुपमा उपस्थित हुने इच्छा व्यक्त गरेपछि शोका निर्माताले पनि दुबैलाई अतिथी निर्णायकको रुपमा राख्न राजी भएका हुन् ।
यो शोमा मुख्य निर्णायकको रुपमा रहेकी शिल्पालाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए । शिल्पा शोबाट टाढा रहँदा उनका फ्यान भने पक्कै निराश हुनेछन् ।
SQL requests:209. Generation time:1.254 sec. Memory consumption:17.31 mb